Jacinta Cremades. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Laghachi na Paris | Akwụkwọ dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 17/11/2021 12:00 | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Novela
Foto: Jacinta Cremades, profaịlụ na Doumo Ediciones.
Jacinta Cremades A mụrụ ya na Barcelona, ​​​​ma ọ bụ nwata nọ na France. O nwere nzere doctorate na Literature, yana onye nkatọ agụmagụ. Ọ rụrụ ọrụ na akwụkwọ akụkọ dị ka Ọdịbendị, The Eleghị anya, Akwụkwọ akụkọ Littéraire, El Mercurio y Ụwa. Ọ kụzikwaara klaasị Spanish na agụmagụ, ebe o jiri malite ya Lọghachi na paris, akwụkwọ akụkọ mbụ ya. Daalụ nke ukwuu oge gị na obiọma gị ajụjụ ọnụ a ebe ọ na -agwa anyị gbasara ya na ihe niile ntakịrị.
Jacinta Cremades - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Lọghachi na paris ọ bụ akwụkwọ ikpeazụ gị. Kedu ihe ị gwara anyị maka ya na ebe echiche a siri?
JACINTA ude: Akwụkwọ akụkọ ahụ na-ekwu Nlaghachi Teresa na Paris, ebe o biri n'oge ọ bụ nwata na ntorobịa, mgbe nne ya Maite nwụsịrị. Ọ na-alọghachi na nwa ya nwanyị Lucía onye ọ na-agwa ya, ekele maka akụkọ ndị dị n'ime igbe, akụkọ nne ya nke hapụrụ obodo ya Barcelona ịhapụ omenala ezinụlọ ya ma malite ndụ ọhụrụ.
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ na n'otu oge ahụ na-ejikọta ndụ nke ị bụ ụmụ nwanyị atọ sitere n'otu ezinụlọ: Maite, onye rutere na Paris na May 68, Teresa, onye chetara nwata ya n'oge 80s, na Lucia, na mmalite nke 2000. Akụkụ nke nlọghachi nke m na Paris, bụ́ ebe m birikwa n’oge m bụ nwata na n’okorobịa. Ya mere ọ bụ a laghachi na mgbọrọgwụ ezinụlọ, na ajụjụ ndị dị adị na mkpa nke nnyefe.
JC: Enwere m ihe onyonyo na-agụrụ nne m ihe Lee petit Nicolas, ma ọ bụghị n'ụzọ ọzọ, ha abụọ dinara n'àkwà ụlọ nkwari akụ mgbe ha na-eme njem na Gris.
Akwụkwọ akụkọ mbụ m bụ ụdị plagiarism nke Nchịkọta nke Fred Uhlman dere, akụkọ m gụrụ banyere ọbụbụenyi dị n’etiti otu nwa okorobịa onye Juu na nwa okorobịa Nazi nke nwere mmetụta miri emi n’ahụ́ m. Ekele dịrị Chukwu na akwụchaghị m ya, ma ọ bụghị na m gaara ejedebe n'ụlọ mkpọrọ ndị tọọrọ.
JC:Ụmụ nwanyị na-amasị m, enweghị m ike inyere ya aka! Ụmụnna nwanyị Brọnté, Carmen Martin GaiteElizabeth Strout na Nancy Huston.
Ndị: Kedu akparamagwa dị n'ime akwụkwọ nke ị masịrị ị ga-ahụ ma mepụta?
JC: Ọ ga-amasị m izute ndị ahụ Ọnụ nke Monte Cristo. Keekwa nwanyi na Alcuza Dámaso Alonso gbatara ya.
JC: Edere m site na ụtụtụ y Leo site na n'ehihie. Ọ gaghị enwe ike ime ya n'ụzọ ọzọ.
JC: Site na ụbọchị, n'ụlọ anyị nwere n'ime ubi nke Ávila.
JC: Nke nkwonkwo, nke akụkọ, nke nwalee Ha bụ ndị kacha amasị m.
JC: Ana m agụ Ụmụnne nwanyị Borgo Sud nke Donatella Di Pietrantonio dere, Akwụkwọ akụkọ nke Chirbes, na Onye na-anakọta ihe ịtụnanya Rafael Narbona gbatara ya. Na m ede akwụkwọ akụkọ gbasara Ireland onye ihe odide ya ka na-ebi na Paris.
JC: Echere m na anyị na-enwe mgbawa nke ndị mbipụta nwere profaịlụ dị iche iche ma a bịa n'ibipụta. Ha niile na-agba mbọ n'ịkpọsa ederede, edemede, akụkọ ihe mere eme, edemede. Ha nọ ebe ahụ maka ịhụnanya akwụkwọ na nke ahụ bụ ọrụ ebube.
JC: Society agbanweela nke ukwuu nke na ọ ga-adị mkpa ikwu okwu, dee, gbasara tupu na mgbe mmadụ gasịrị. M ga-agbalịsi ike ịhụ ya nke ọma. Ihe kacha mma bụ iru na anyị nwere ọgụgụ isi nke ịntanetị, ọ bụ ezie na ọ bụkwa nnukwu ọdịda anyị. Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ha kwere ka m họrọ oge a ga-amụ, agaraghị m ahọrọ nke a ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Jacinta Cremades. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ laghachi na Paris
Okooko osisi Sunflowers